Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Iningi labantu baseMelika Abathintekile Bagunyaza I-Psychedelics Ukwelapha Izifo Zengqondo
Inhlolovo entsha eyenziwe yi-Harris Poll egameni le-Delic Holdings Corp. ibika ukuthi cishe izingxenye ezimbili kwezintathu zabantu baseMelika abahlushwa ukukhathazeka/ukucindezeleka/i-PTSD (65%) bakholelwa ukuthi imithi ye-psychedelic (okungukuthi i-ketamine, i-psilocybin ne-MDMA) kufanele yenziwe itholakale. ezigulini ezinokukhathazeka okungazweli ekwelashweni, ukudangala noma i-PTSD.
Ngokocwaningo, olwenziwa ku-inthanethi ngoDisemba 2021 phakathi kwabantu abadala abangama-953 base-US abanenkinga yokukhathazeka/ingcindezi/i-PTSD, cishe izingxenye ezimbili kwezintathu (63%) zabantu baseMelika abasebenzise imishanguzo kadokotela ukwelapha ukukhathazeka/ukudangala/i-PTSD bathi ngenkathi umuthi. basizwa, basenemizwa eyinsalela yokukhathazeka, ukucindezeleka noma i-PTSD. Ngaphezu kwalokho, i-18% ithi imithi ayizange ithuthukise isimo sabo / isenze saba sibi kakhulu.
"Sibona inkinga ethule ethinta abantu emhlabeni wonke ebhebhethekiswa ubhubhane oluqhubekayo, futhi imiphumela yalolu cwaningo kufanele iphoqe ochwepheshe bezokwelapha abaningi kanye nabashaya umthetho ukuthi basekele izifundo ezijulile ngezinzuzo zokwelapha ze-psychedelic medicine," kusho uMat Stang, umsunguli kanye ne-CEO ye-Delic. “Lo mndeni othembisayo wemithi emisha unamandla okusebenza kangcono kunemithi yesintu enemiphumela engemihle emincane, ubuyisele abantu ubuhle babo. Inkinga yempilo yengqondo yezwe lethu ayithinti nje impilo yomphakathi kuphela, kodwa nasemnothweni-unyaka nonyaka, ukugula ngengqondo okungalashwa kudla i-US imali efinyelela ezigidini eziyizinkulungwane ezingama-300 zamaRandi ekulahlekelweni komkhiqizo.”
Ngokocwaningo, u-83% wabantu baseMelika ababhekene nokukhathazeka, ukudangala noma i-PTSD bangavuleleka ekulandeleni ezinye izindlela zokwelapha ezifakazelwe ukuthi zisebenza kangcono kunemithi kadokotela enemiphumela engemihle embalwa. Kulabo abahlushwa wukukhathazeka/ukucindezeleka/i-PTSD, abaningi bangavulelwa ukusebenzisa lezi zinto ezilandelayo ezihlonzwe njengezinye izindlela zokwelapha ezingase zibe khona kulabo abafuna ukubhekana nezimo zabo zempilo yengqondo:
• I-Ketamine: I-66% ingavuleleka ekuphishekeleni ukwelashwa kusetshenziswa i-ketamine ukwelapha ukukhathazeka, ukudangala noma i-PTSD uma kwafakazelwa ukuthi isebenza kangcono kunemithi kadokotela enemiphumela engemihle embalwa.
• I-Psilocybin: I-62% ithe izovulekele ukulandela ukwelashwa usebenzisa i-psilocybin enqunywe udokotela ukuze abhekane nokukhathazeka kwabo, ukucindezeleka noma i-PTSD uma kufakazelwa ukuthi isebenza kangcono kunemithi kadokotela enemiphumela emibi embalwa.
• I-MDMA: I-56% izovulelwa ukuphishekela ukwelashwa usebenzisa i-MDMA enqunywe udokotela ukuze aphathe ukukhathazeka kwabo, ukucindezeleka noma i-PTSD uma kufakazelwa ukuthi iphumelela kakhulu kunemithi kadokotela enemiphumela emibi embalwa.
Lolu cwaningo lwenziwe ku-inthanethi ngaphakathi kwe-United States yi-Harris Poll egameni likaDelic kusukela ngoDisemba 6 - 8, 2021 phakathi kwabantu abadala abangu-2,037 abaneminyaka engu-18 nangaphezulu, phakathi kwabo abangu-953 abahlushwa ukukhathazeka/ukudangala/i-PTSD. Le nhlolovo eku-inthanethi ayisekelwe kusampula yamathuba ngakho-ke akukho silinganiso sephutha lesampula le-theoretical esingabalwa.
Ukuhlolwa Okusha Komtholampilo Kwe-Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer